aluminium Oksijiin aan caadi ahayn; Tin (II) oksaydh; SnO; Xabagta Tin aluminium oksaydh CI77860; Qalabka CIPigment 5; Sn; Tin
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) kaga falcelisa SnO (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Sn (CI77860; CIPigment Metal 5; Sn; Tin)?
SnO waxaa hoos u dhigay Al heerkulka sare
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa SnO (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Sn (CI77860; CIPigment Birta 5; Sn; Tin), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda SnO (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta SnO (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SnO (Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SnO (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (Stannous oxide; Tin(II) oxide; SnO; Tin oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Sn (CI77860; CIPigment Metal 5; Sn; Tin)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jireed ee Sn (Stannous oxide; Tin (II) oxide; SnO; Tin oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikada ee leh Sn (CI77860; CIPigment Metal 5; Sn; Tin) alaab ahaan?
aluminium carbon dioxide aluminium oksaydh kaarboonka
(Trang BAC) (xoog leh)
4 3 2 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) ee CO2 (carbon dioxide) kaga falcelisa?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo C (kaarboon)?
Ku shubista qulqulka gaaska CO2 ee maraya Al
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay la falgashaa CO2 (carbon dioxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga C (kaarboon), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Al2O3 (kaarbon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C (carbon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C (kaarboon) badeecad ahaan?
aluminium rasaasta (ii) xabagta aluminium oksaydh horseedi
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
Waa maxay xaalada falcelinta ee Al (aluminium) kaga falcelisa PbO (lead(ii) oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Pb (lead)?
PbO waxay la falgashaa Al heer kulka sare
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa PbO (lead(ii) oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Pb (Lead), oo u muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda PbO (Lead (ii) oxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3PbO → Al2O3 + 3Pb
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta PbO (lead(ii) oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee PbO (lead(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh PbO (lead(ii) oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (lead(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Pb (lead)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Pb (lead(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikada ee leh Pb (lead) alaab ahaan?
biyaha sodium aluminium aluminium oksaydh sodium hydroxide
(lng) (rnn) (rnn) (digo yara)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + NaAlO2 → Al2O3 + 2NaOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ee NaAlO2 (sodium aluminate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo NaOH (sodium hydroxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaAlO2 (sodium aluminate)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaAlO2 (sodium aluminate), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + NaAlO2 → Al2O3 + 2NaOH
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaAlO2 (sodium aluminate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaAlO2 (sodium aluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaAlO2 (sodium aluminate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2O3 (sodium aluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (sodium aluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
aluminium Dabaysha Manganese (III) aluminium oksaydh manganese
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) ka falcelisa Mn3O4 (Manganese(III) oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Mn (manganese)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa Mn3O4 (Manganese(III) oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Mn (manganese), oo ka muuqda dhammaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda M3O4 (Manganese(III) oxide), oo meesha ka baxaysa
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 8Al + 3Mn3O4 → 4Al2O3 + 9Mn
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Mn3O4 (Manganese(III) oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Mn3O4 (Manganese(III) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mn3O4 (Manganese(III) oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (Manganese(III) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Mn (manganese)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Mn (Manganese(III) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mn (manganese) badeeco ahaan?